2x14 News Podcast iPad: iOS 9.2, watchOS 2.1, OS X 10.11.2 ary tvOS 9.1 | Vaovao IPhone
Amin'ity herinandro ity amin'ny podcast anay mandinika ny vaovaon'ny kinova farany navoaka 24 ora lasa izay izahay tamin'ny rafitra fiasan'ny Apple. iOS 9.2 miaraka amin'ny zava-baovao ao amin'ny Apple Music, tvOS 9.1 izay farany mitondra fanampiana ho an'ny fampiharana Remote an'ny iOS, watchOS 2.1 ary OS X 10.11.2. Ho fanampin'izany, izahay dia manome ny hevinay momba ny tranga bateria Apple vaovao sy ny sisa amin'ireo hetsika mandritra ny herinandro. Halahelo azy ve ianao?
Henoy »2 × 14: iOS vaovao, tvOS, watchOS, OS X ary maro hafa» amin'ny Spreaker.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Vaovao IPhone » Podcast » Podcast 2 × 14 an'ny iPad androany: iOS 9.2, fiambenanaOS 2.1, OS X 10.11.2 ary tvOS 9.1